Ihe I Kwesịrị Trachọgharị iji kpochapụ Ihe Mgbaru Ọsọ Gị | Martech Zone
Tọzdee, Nọvemba 13, 2014 Mọnde, Jenụwarị 9, 2017 Max Kremer
Daysbọchị ndị a, ọ fọrọ nke nta niile nchịkọta ngwaọrụ dị n'ebe ahụ ka ị soro cira ihe. Clicks na-anọchite anya ọtụtụ mmekọrịta onye ọrụ nwere na saịtị gị. Mana ozugbo inwere data ahu, ugbua gini? Nwere ike ịlele ọ bụla pịa ndị ọbịa na-eme, mana nke ahụ bụ idei mmiri nke data ị gafere. Pịa nsuso, mgbe etinyere ya nke ọma, nwere ike ịbụ otu ngwaọrụ kachasị ike iji ghọta nke ọma etu ndị mmadụ si emeghachi omume na ọdịnaya gị yana etu ahịa gị si emetụta fọksị ntụgharị gị.
A post m ga-dina isii mfe ụkpụrụ nduzi na-enyere gị aka na click nsuso. Ebumnuche m bụ inyere gị aka ịnakọta data nwere ike ịkọwapụta maka uru saịtị gị bara ma ghọta ike ụdị njikarịcha saịtị dị iche iche.
1. Esochina ihe niile
Ọ bụghị ihe niile clicks na-kere hà. Naanị obere akụkụ nke UI gị na saịtị ahụ dị ezigbo mkpa iji soro. Ọ bụrụ na omume egosighi mmasị dị elu karịa karịa na azụmaahịa gị, ọ bụ naanị mkpọtụ. Ọ gaghị enye gị nghọta ọ bụla banyere akparamagwa nke ndị ọbịa gị kacha elu. Clicks na igodo, pagination na in-ederede njikọ adịkarịghị uru nsuso, ma e wezụga na obere ọnọdụ.
2. Soro mmekọrịta bara uru
Cho ihe ichoro ka ndi ahia gi me. N'ihe banyere e-commerce, ọ bụ tinye na ụgbọ ibu njikọ na Lelee bọtịnụ, na ụfọdụ peeji nke yana ụzọ dị oke egwu nye ndị ahụ. A Rịọ a Quote ụdị ma ọ bụ ụdị kọntaktị ejiri maka ọgbọ na-edu ndú bụ ezigbo ndị na-aga ime. N'ihe banyere ọrụ ntanetị ma ọ bụ ngwa SAAS, njikọ njikọ na peeji ọnụahịa gị bụ ebe dị mma ịmalite.
3. Chee echiche maka usoro ndị ị na - eme
Sochie ihe ndị na-egosi mgbanwe site na otu usoro ndụ na-esote. Nke a bụ ihe atụ e-commerce:
nnweta - Onye ọbịa bịara na ebe nrụọrụ weebụ gị mgbe ịchọchara ma ọ bụ ịpị njikọ njikọ na saịtị ọzọ. Sochie clicks na Chọgharịa Ngwaahịa bọtịnụ.
-Zụta Ihe / Nbanye - Onye ahụ na-ere ahịa ma ọ bụ na-arụ ọrụ gị. Sochie clicks na Debanye aha or Mebe akaụntụ bọtịnụ.
njikọ aka - Onye ahụ laghachiri iji saịtị gị. Sochie clicks na tinye na ụgbọ ibu bọtịnụ.
Zụta / Ngbanwe - Onye ahu azụrụ ihe ma ọ bụ dejupụta usoro ndu ọgbọ. Sochie clicks na Lelee bọtịnụ.
Ntuziaka - Onye ahụ kesara saịtị gị na mgbasa ozi ma ọ bụ kpọọ ndị ọzọ. Sochie clicks na Facebook Dị ka wijetị.
N'ezie, usoro dị n'elu ga-adị iche na azụmaahịa azụmaahịa, mana ị nwetara echiche ahụ.
4. Jiri usoro nyocha dị mfe
Onye ọ bụla UI mmewere ị soro kwesịrị inwe akara. Ọ nwere ike ịdị mfe dịka 1 ka 10, ma ọ bụ pasent. Systemdị sistemụ ọkwa ị jiri adịghị mkpa, ọ bụrụhaala na ọ gbanwere. Naanị jiri ya mee ka mmekọrịta ya dị mkpa. Usoro a na - amanye gị ịkwalite omume ndị ọrụ, nke na - enyere aka ịmepụta akụkọ bara uru karị. Dịka ọmụmaatụ, ị nwere ike ịmepụta akụkọ ga-egosi gị ndị niile mere 3 ma ọ bụ karịa ihe na akara 95/100.
5. Soro usoro ihe omume gi nke oma mee
Tupu ejide gị na nkọwa, buru ụzọ tụlee ụdị ihe mmadụ nwere ike ịmekọrịta na saịtị gị. Otu udi ihe bu vidiyo. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị nwere ọtụtụ ụdị vidiyo na saịtị gị, ị nwere ike ịchọrọ ịkọwa kpọmkwem na ụdị vidiyo gị.
Dịka ọmụmaatụ, ka anyị kwuo na ndị ọbịa nwere nhọrọ ịmụtakwu banyere ngwaahịa gị site na ikiri vidiyo vidiyo, ma nwee ike ịga na ngalaba ọzọ maka vidiyo ọzụzụ. Ndị a bụ ụzọ abụọ dị iche iche. Iji mee ka ọdịiche dị n'etiti ha, ị nwere ike ịbido ihe omume pịa gị Vidio - Ahịa, n'ihi na ịchọrọ ka atụmanya pịa vidiyo ndị a. Nke abụọ udi maka Vidio - Ọzụzụ nwere ike ịchọta ndị ahịa ugbu a nwere mmasị ịmụtakwu ihe.
6. Jiri pịa nsuso soro untrackable
Ingdebanye ndebiri ma ọ bụ ibe nwere ike ịtụ ụjọ maka ndị na-ere ahịa nkezi. Na iso ndị otu mmepe gị na ụlọ ọrụ gị na-arụ ọrụ nwere ike iwepụta oge ma ọ bụ ọbụghị na-agaghị ekwe omume ịme mgbanwe ndị dị mkpa na usoro nsuso gị. Ọnwụnwa bụ ihe ndezi ihe na-ahụ maka ịtọlite ​​web nchịkọta. Trialfire na-enye gị ohere ịnyagharịa site na ebe nrụọrụ weebụ gị dị ka onye ọbịa mgbe niile, mana pịa ọ bụla ị mere na-enye gị ike ịtinye 'nsuso ntụtụ'. Nwere ike ịgbakwunye otu nsuso nsuso na ihe ọ bụla, gụnyere njikọ, bọtịnụ, na ubi.
Tags: nnweta nsochitinye na ụgbọ ibuAnalyticsnchịkọta ihe omume nchịkọtaLeleeihe omumeomume nsuso ihe omumeomume nsuso onye ọrụ interfacetupu ịzụta nsusoNtuziaka nsusojuo ajujubanye nsuso
Max Kremer bụ ngalaba-nchoputa na CTO nke Ọnwụnwa, editọ na-ahụ maka ịtọlite ​​nyocha weebụ.
Max na-eri nri ma na-eku ume teknụzụ, ọgba tum tum, na nso nso a, rụọ ọrụ mmegharị. Ọ na-agba afụ ọnụ oyi.
Design enweghị ike ịnapụta afọ ojuju afọ